माया बैगुनी, नभई नहुनी ! |माया बैगुनी, नभई नहुनी ! – हिपमत
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच तीन दिनअघि बालुवाटारमा भएको भेटघाटको चर्चा चुलिँदो छ । त्यसो त, प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी नेताबीचको भेटघाटलाई सामान्य रुपमा लिन सकिने भए पनि सत्तारुढ दलभित्र बढ्दो कलहबीच भएको उक्त भेटवार्तालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी फुटिहाल्यो भने देउवासँग सत्ता साझेदारी गर्न प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने आशंका नेकपाभित्रै कतिपयले गरिरहेका छन् । काँग्रेस वृत्तमा भने नेकपा विवादमा ओलीलाई साथ दिएर संवैधानिक नियुक्तिहरूमा देउवाले ठूलो हिस्सा लिन खोजेको आशंका छ । यसअघि संकटमा ओलीलाई ढाडस दिएर देउवाले आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरेको आरोप काँग्रेसभित्रैबाट लाग्दै आएको छ ।
देउवा र ओलीबीच गत वैशाख १२ गते राति बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टा गोप्य छलफल भएको थियो । त्यतिबेला पनि नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो । ओली र देउवाबीचको भेटघाटले नेकपामा ओलीइतर खेमालाई त आशंकित बनाएकै थियो, काँग्रेसभित्र पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सशंकित बनेको थियो ।
देउवाप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले सार्वजनिक रुपमै अंकगणितको जोडघटाउमा काँग्रेस लाग्न नहुने बताएका थिए । १७ वैशाखमा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिकोे बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्यको कुरालाई खारेज गरेको थियो ।
देउवा र ओलीबीच पहिलो भेट ३० को दशकमा केन्द्रीय कारागारमा भएको थियो । केही समय ओली र देउवाले कारागार जीवन सँगै बिताएका थिए । नेविसंघको अध्यक्षका रुपमा देउवाले कारागार जीवन बिताउँदा ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति ठुलो पहिचान बनाइसकेका थिएनन् । यद्यपि जेलको बसाइले उनीहरुबीच आपसमा केही भावनात्मक सम्बन्ध बढेको तथ्यलाई बेलाबखत दुवै नेताले स्मरण गरेको पाइन्छ ।
काँग्रेसको सोही बैठकले घुमाउरो भाषामा ओलीको राजीनामा मागेको थियो । विभिन्न घटनाक्रम जोड्दै ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक वैधता गुमाएको काँग्रेसको ठहर थियो । गत असारमा ओलीका दूत बनेर सुवास नेम्वाङले देउवा निवासमै पुगेर देउवासँग भेट गरेका थिए । तर काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल आफू प्रतिपक्षी भूमिकामै रहने र नेकपाभित्रको रस्साकस्सीमा कुनै चासो नरहेको बताउँदै आएको छ ।
स्वयं काँग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवाले संसदमा सम्बोधनका क्रममा पनि पार्टीको यही धारणा राखेका थिए । २६ वैशाखको संसद बैठकमा देउवाले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाईसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन ओलीलाई सुझाएका थिए ।
केमिस्ट्री मिलेका घटना
०५४ सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्ने सन्दर्भमा देउवा र ओलीको केमिस्ट्री खुब मिलेको थियो । महाकाली सन्धि पारित गराउने पक्षमा रहेका देउवालाई ओलीको दह्रो साथ थियो, यहाँसम्म कि, ओलीले पार्टी विभाजनको जोखिम मोलेर भए पनि महाकाली सन्धिको पक्षमा आफूलाई उभ्याए ।
०५९ सालमा पनि देउवा र ओलीबीच केमिस्ट्रिी मिलेको थियो । त्यतिबेला ‘गोर्खाली राजाले न्याय दिए’ भन्दै प्रतिगमन सच्चिएर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको बलियो साथ थियो । ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै तत्कालीन एमाले पनि देउवा सरकारमा सामेल हुनुमा ओलीकै मुख्य भूमिका थियो ।
पछिल्लो पटक यी दुई नेताबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का सवालमा पनि समान मत छ । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने सवालमा ओली र देउवा एक ठाउँमा थिए र छन् पनि । कतिपयले नेकपा विभाजनको बिउ एमसीसी बन्ने विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर यतिबेला नेकपामा एमसीसीभन्दा ओलीको कार्यशैली विवादको बिउका रुपमा देखा परेको छ ।
यता भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठुला प्रकरणदेखि ओलीको शासकीय क्षमतामाथिको मुद्दासम्ममा समेत देउवा नरम भइदिएको आरोप छ । ओलीले पनि देउवालाई खुसी बनाउन जापानका लागि राजदूत रहेकी प्रतिभा राणा (देउवाकी सासु) लाई फिर्ता नबोलाएको चर्चा छ । अघिल्ला सरकारले नियुक्ति गरेका अधिकांश राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा ओलीले राणालाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
यता देउवाले सरकारका कमजोरीप्रति आक्रामक नभई राज्यका संयन्त्रमा आफ्नो सहभागिता खोज्न थालेपनि ओलीले केही उदार भाव देखाएको पाइन्छ ।
कार्यकर्तालाई सरकारी रवैयाविरुद्ध लड्न उक्साउने देउवाले बालुवाटारमा ओलीसँग चोचोमोचो मिलाउने गरेको काँग्रेस नेताहरुकै आरोप छ । देउवाले भने ती भेटवार्तामा के छलफल भयो भन्नेबारे पारदर्शी रुपमा बताउने गरेका छैनन् । देउवाको यही मौनतालाई ओली पक्षले आफूखुसी व्याख्या गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरुले ओली र देउवाबीच संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफलका लागि भेट हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । संवैधानिक आयोगलगायत प्रमुख नियुक्तिहरूमा भागबन्डाको सवालमा छलफल हुने गरेको सूचना प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमार्फत चुहिने गरेको छ ।
यसरी सार्वजनिक भएका सूचनाका आधारमा ओली र देउवाबीच पटक–पटक विवाद बढ्दै गएका समाचारहरु पनि प्रकाशमा नआएका होइनन् । खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिको भागबण्डामा सहमति हुन नसकेपछि ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी प्रावधान नै परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा कमजोर तुल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भए पनि चौतर्फी विरोधपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता भयो ।
यसअघि देउवाको अनुपस्थितिमै ०७६ माघ ६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर ओलीले पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति गरेका थिए ।
ओली र देउवाबीचको सत्ता साइनो त्यति सुमधुर छैन । यी दुई नेताबीच आपसमा कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध रहेन, तर समय समयमा एक अर्काबीच कुनै न कुनै रुपमा सम्बन्ध र सहकार्य गर्नै परेका उदाहरण पनि छन् । महाकाली सन्धिमा होस् या एमसीसीका सवालमा होस्, दुवै नेताको एउटै स्वर सुनिएको छ ।
त्यसपछि ओलीप्रति देउवा बढी नै चिढिए । भारतले नेपालको भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा देउवाले ओलीको मिलेमतो रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाए । ओली पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढेका थिए ।
ओली र देउवाबीचको सत्ता–साइनो
शासनसत्तामा भने दुवैबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध र सहकार्य देखिएको छैन । ०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको अल्पमतको सरकार ढालेर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवाले जुन सरकारलाई विस्थापित गरे, त्यही सरकारमा गृहमन्त्री थिए ओली ।
०७३ साउनमा ओलीलाई बालुवाटार (प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास)बाट बालकोट (ओलीको निजी निवास) पठाउने खेलाडी देउवा नै थिए । देउवाले तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नो काबुमा ल्याएर ओलीसँगको साथ टुटाइदिएका थिए ।
काँग्रेसका कतिपय नेताले नेकपाको झगडामा काँग्रेसको कुनै प्रकारको भूमिका रहन नहुने टिप्पणी गरिरहेका छन् । ओली सरकारसँग साइनो गाँस्ने कुरा काँग्रेसका लागि आत्महत्या बराबर हुने काँग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसी, प्रदीप पौडेललगायतको धारणा छ ।
त्यतिबेला ओलीको बहिर्गमनसँगै देउवाको सत्ता यात्रा तय भएको थियो । प्रचण्ड र देउवाबीच भएको भद्र सहमतिपछि ०७४ जेठमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर ओलीले पनि देउवासँग बदला लिएरै छाडे । प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म प्रचण्डलाई साथमै राखेर माओवादीसँग गठबन्धन गरी आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने ध्येयमा रहेका देउवालाई ओलीले असफलमात्र तुल्याएनन्, एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई सफल तुल्याए ।
चुनावी गठबन्धनमा हैसियतभन्दा ठूलो भाग खोजिरहेको माओवादीलाई ओलीले ४० प्रतिशतको पासा फ्याँके । अनि देउवा–प्रचण्डको ‘दोस्ती’ टुट्यो । तर समयको धार परिवर्तन भइसकेको छ । यतिबेला ओली र प्रचण्डबीच दुरी बढेको छ भने ओलीले देउवासँग आफ्नो सत्ता जोगाइदिन सहयोग मागेको चर्चा चलिरहेको छ ।
यता देउवा पक्षकै नेता एनपी साउदले ओली सरकारमा जाने कुरा कल्पनाको विषयभन्दा टाढाको कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारमा जाने कुरा नै भएन । नेकपा नफुटीकन सत्तासाझेदारीको विषय नै ननिस्किने भएकाले अहिले त्यसबारे कसैले पनि कल्पना नै गरेको छैन ।’
news sources : https://ratopati.com/story/155941/2020/11/23/oli-deuba-relation?fbclid=IwAR3Phi3GsIePcXK5gGQgR13XQe-pcrqewh-SMn7m-nM3A2HDkwgOxCyloDA